Tsarasaotra-Ivato: mitentina 16 miliara Ar ny lalana 1 km | NewsMada
Tsarasaotra-Ivato: mitentina 16 miliara Ar ny lalana 1 km
Hotokanana, rahampitso 1 novambra, ny lalana miainga etsy Tsarasaotra Alarobia, mivoaka eny Ivato. Mirefy 11 km ity lalana ity, natao voalohany ny taona 2017, nandraisana ny fivoriamben’ny Frankofonia, saingy tsy nampiasain’ny daholobe mihitsy satria tsy vita tanteraka. Taty aoriana vao nahita vola, nindrana tany amin’ny banky sinoa Exim Bank ny fitondrana Malagasy, ka mitentina 184 miliara Ar ny tetimbidiny, izany hoe, tombanana 16,72 miliara Ar ny 1 km. Voalaza fa efa naloan’ny Exim Bank ny 2/3-n’ny famatsiam-bola hanaovana azy, ary homena aorian’ny fahavitany tanteraka ny 1/3 ambiny.
Natao godirao ny lalana, tokony ho roa sosona raha ny fenitra, raha toa ka iray sosona ihany ilay natao voalohany, nanenjehina ny fivoriamben’ny Frankofonia. Efa mipetraka ny andrin-jiron’ny Jirama hanazava ny lalana, saingy tsy mbola vita tanteraka. Tsy natao herinaratra iana takelaka misarika herinaratra avy amin’ny masoandro, toy ireo lalana eny amin’ny vahilava.
Ho vita amin’ny jona 2019 ny Ambohitrimanjaka
Ankoatra ity lalana Tsarasaotra-Ivato ity, tokony ho vita amin’ny jona 2019 koa ny eny Ambohitrimanjaka mivoaka any Ambohidratrimo. Nambaran’ny minisitry ny Asa vaventy, fa anisan’ny olana ny fanesorana ny tranon’olona andalovan’ny lalana. Raha ny lalàna mifehy ny fanalana fananan’olon-tsotra eo amin’ny toerana alain’ny fanjakana, noho ny asa ho an’ny daholobe, tsy maintsy miala ny tompony ary honerana vola ho tambiny ary tsy anavahana na iza na iza.
Hamaha betsaka ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra, indrindra ny mankeny Ivato sy ny manodidina ny fahavitan’ireo lalana roa ireo.